नेपालमा संचालित डाटा सेन्टरहरु के के छन् ? - Living with ICT
Home / Featured / नेपालमा संचालित डाटा सेन्टरहरु के के छन् ?
नेपालमा संचालित डाटा सेन्टरहरु के के छन् ?
Admin Apr 18, 2017	Leaveacomment
सरकारी डाटा सेन्टर – जिआइडिसी
सन् २००० मा आइटी पोलिसी निर्माण भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अवलम्बन गर्न थालेको हो । यसअनुरुप राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रं र उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग गठन भयो । केन्द्र र आयोगको पहलमा सिंहदरबारभित्र सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टर(जिआइडिसी) निर्माण भएको छ ।
‘जिआइडिसी नेपालको राष्ट्रियस्तरको एक माब हाइटेक डेटा सेन्टर हो,’ एनआइटिसीका सचना अधिकृत रमेश पोखरेलले भने, ‘जिआइडिसीलाई कोरिया, जापान, युएसएसहित विभिन्न २० देशका डाटा सेन्टरको मोडलको रुपमा विकास गरिएको छ,’ उनले भने । जिआइडिसीले सरकारका डाटालाई स्टोर र डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनले सर्वसाधारणलाई पनि अन्य धेरै आइटी सर्भिसेस इन्टरनेट मार्फत् प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘डेटा इन्टिग्रेसन, इमेल इन्टरनेट होस्टिङ, हाइ स्पिड नेटवर्क र विभिन्न मन्त्रालय र तिनिहरुका विभागबीच कम्प्युटर सेयरिङ जस्ता सेवा प्रदान गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने ।
यसअन्तर्गत डट जिओभी डट एनपीमा डोमने रजिस्टेसन, वेब होस्टिगं, सर्भर कोलेकसन, इन्टरनेट सेवा, गेट पास सिस्टम, पब्लिक आइपी सर्भिस, इमेल सर्भिस, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट, भर्चअलाइजेशन÷क्लाउड आदि सेवा प्रदान गरिएको छ । २७ भन्दा बढी मन्त्रालय, विभागहरु, सरकारी आयोग, राष्ट बैंक, अदालत, महानगरपालिकादेखि गाविसस्तरका डाटा यसमा राखिएको छ । जिआइडिसीले पछिल्लो समय क्लाउड सर्भिस सुरुवात गरेको छ । यसअनुरुप केन्द्रमार्फत् १६ सरकारी कार्यालयलाई भर्चअल क्लाउड वितरण गरिएको पोखरेलले बताए ।
हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी
जिआइडिसीका लागि ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । यो हेटौंडामा निमार्णधिन डिजास्टरी रिकभरी सेन्टरका लागि समेत प्रयोग भइरहेको छ । हेटौंडाको रिकभरी साइट १ वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘भकम्पले गर्दा ढिलो भएको हो । ४÷५ महिनामै निर्माणकार्य सकिन्छ र एक वर्षमा पर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसक्छ,’ पोखरेलले भने ।
निजी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर
नेपालमा हाल क्लाउड हिमालय, एक्सेस वल्र्ड, डाटा हब, ओम डाटा सेन्टर, सिल्भर लाइन, सिन्टग्रेट आदिले व्यवसायिक रुपमा डाटा सेन्टर सुविधा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांशले डाटा र व्यवस्थित क्लाउड सर्भिसेसमा ध्यान दिएका छन् । त्यस्तै केही बैंकहरुले पनि आफ्नै डाटा सेन्टर खोलेका छन् । सरकारीस्तरमा आन्तरिक राजस्व विभागलगायतले रिकभरी साइटसहितको डाटा सेन्टर प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसअन्तर्गत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, नबिल बैंकलगायतका ठूला बैंकले आ–आफ्नै सर्भरहरु राखेका छन् भने अरुले डाटा सुरक्षित राख्न निजी तथा विदेशी कम्पनीसँग सहयोग लिइरहेका छन् । केही डाटा सेन्टर सर्भिसेस ः
डाटा सेन्टर कम्पनी क्लाउड हिमालयले नेपालमा ३ ओटा डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी ५ वर्षमा पुरै देशको पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको डाटा आफ्नो सेन्टरमा राख्ने योजना उसले ल्याएको छ । कम्पनीले प्रदान गर्ने कोलेकसन सर्भिस र इनफ्रास्ट्रचरले आइटी अपरेसन र डाटालाई चौबिसैं घण्टा निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्तालाई मल्टिपलक र्याक र हाल्फ र्याक उपलब्ध गराइन्छ भने उनीहरुकै नियन्त्रण्मा डाटा रहन्छ । क्लाउड हिमालयले बैंक, वित्तिय संस्था, अस्पताल, ठला कलेज, मिडिया, एयरलाइन्स लगायतका डाटा आफ्नोमा राख्न सक्ने बताएको छ ।
नेपालको चर्चित क्लाउड सेवा प्रदायक हो, एक्सेस वल्र्ड । यसले क्लाउड भिपिएिस, वेब होस्टिङ, इन्टराइज सेक्युर इमेल, कोलोकेशन, डोमेन रजिस्ट्रेसन, एसएसएल सर्टिफिकेट लगायतका सुविधा प्रदान गर्दछ । हाल कम्पनीले क्लाउडमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै प्राइभेट क्लाउड र पब्लिक क्लाउड बनाउने, क्लाउड सर्भिसेस दिने, होस्टिङ सर्भिस दिने सुरक्षित कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउने, म्यानेज्ड सर्भिसहरु दिइरहेको एक्सेस वल्र्डका सिइओ पन्तले बताए ।
पहिलो कमर्सियल डाटा सेन्टर र कोलोकेशन फेसिलिटीको रुपमा डाटा स्पेसले सन् २००४ देखि काठमाडौंबाट काम सरु गरेको हो । यसले पनि ग्राहकको आवश्यकताअनुसार कोलोकेसन उपलब्ध गराउँछ । कम्पनीले सेवाग्राहीका लागि डेडिकेटेड कोलोकेशन, सेयर्ड कोलोकेशन, भर्चअल कोलोकेशन, म्यानेज्ड कोलोकेशन, इन्टरनेटश्नल कोलोकेशन उपलब्ध गराइरहेको छ ।
६ वर्षअघि स्थापित ‘डेटाहव’ले थापाथलीमा डाटा सेन्टर स्थापना गरेको थियो । त्यहाँका सबै सर्भर पूर्ण क्षमतामा गइसकेकाले कम्पनीले बुटवलमा डाटा सेन्टर खालेको छ । यसले पनि धेरैजसो ‘को–लोकेसन’ अनुसार सेवा दिने काम गरेको छ । नजिकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्भर राख्ने काम धेरै भएको छ । क्लाउडमा सर्भिस, एप्लिकेसन वेबसाइट होस्टिङ, सर्भर स्पेसलगायतका सेवामा प्रोत्साहन दिने गरिएको छ ।
एनसेल डाटा सेन्टर
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालभर ४ ठाउमा डाटा सेन्टर निर्माण गरेको छ । उसले काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा र हेटौंडामा यस्तो डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
आन्तरिक राजस्वको डाटा सेन्टर
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि रुपन्देहीको भैरहवामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ । प्राकृतिक प्रकोपमा करदाताका सूचना र तथ्यांक नमेटियोस् र सुरक्षित रहोस् भनेर कार्यालयले एक महिनाअघि मात्र सेन्टर स्थापना गरेको हो । कार्यालयको पनि काठमाडौंमा मुख्य डाटा सेन्टर रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमको डाटा सेन्टर
नेपाल टेलिकमले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तथ्यांकलाई एकीकृत रुपमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याउने डाटा सेन्टरमा उच्च प्रविधियुक्त अप्टिकल फाइबर केबल र नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने छ ।टेलिकमको डाटा सेन्टरमा सरकार, व्यक्ति अथवा कुनै कम्पनीले आफ्नो डाटा (तथ्याङ्क) सुरक्षित राख्न एक विशेष डिभाइस राखिएको हुन्छ ।
Previous एनसेलको ‘कलआयो बोनस पायो’ अफर
Next सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ नेपालमा भाेलि सार्वजनिक हुँदै